လာဖတ်ပြီး ရီသွားပါတယ် မပန်ရေ။ ဘယ်သူရိုက်ရိုက် လှတယ်ဆို သဘောကျမိတာပါပဲ။ ခုဘန်နာလေးက ဘလော့ရဲ့ စာတန်းလေးနဲ့ လိုက်တာတော့ အမှန်ပဲ။း)
My sis! Thanks for sharing your feeling...
ရွှေဂျမ်းရေ ရီသွားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ရွာသားလေးရေ ဘာ ခံစားချက်မှ မဟုတ်ဘူးနော်။ သက်သက် ရယ်စရာ ရေးတာပါ။
သိဘူးလေ ပန်ဒိုရီက ရိုက်ချက်ကောင်းတော့ အဲ့လိုထင်လို့ မေးလိုက်တား) ဒေါ်လေး ရိုက်ချက်ဆိုတာ ခုမှသိတယ် ။ပြိုင်ပွဲကျမှ ဘယ်သူရိုက်ချက်ပိုလှလည်း ကြည့်တော့မယ် ။
ဆရာဖေရဲ့ နဘေနဲ့ ပြောတာကို သဘောကျတယ်။ ပြီးတော့ ပုံပြင်ကိုကောပေါ့။ ပုံပြင်ထဲကလို အသိထဲမှာ ရှိတယ်။ မဝိုင်းနဲ့ ဦးသက်ကြီး ဒါပေမယ့် မိန်းမက ပိုပြီး အပေါင်းအသင်းဆန့် သူ့လက်နဲ့သူ့ခြေဆိုတော့ ကိုဝိုင်း နဲ့ မသက်ကြီးလို့ ခေါ်တဲ့အဆင်ထိ ရောက်သွားတယ်။ ဟီး
အဲ...ဒီပို့စ် ဖတ်တော့သတိရတယ်။ အဝေးကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်မှာ လူကြုံရှိတုံး ကပျာကယာလက်ဖွဲ့လူကြုံပေးရတယ်။ သူ့ အမျိုးသားနာမည်လည်း မသိ၊ လှမ်းမေးချိန်မရတော့
"xxxxxxxxxx(သူငယ်ချင်းအမည်) နှင့် သူ၏ခင်ပွန်း အတွက်" ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်တာ..... ခုထိ မိတ်ဆွေ မပျက်လို့ တော်ပါသေးရဲ့.....
မုဒိတာစိတ်လေးများ ထားပေးနိုင်ရင် အကောင်းသားပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ချီးမွမ်း(၇)ရက်၊ ကဲ့ရဲ့(၇)ရက်မို့
နာမည်တစ်လုံးရဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးတာတော့ မလုပ်သင့်တာ အမှန်ပါ။
သံဝေဂရစရာ ပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကွန်မင့်အဖြစ် တင်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမှာပဲ
ဆီပုံးမှာလည်း မနှုတ်ဆက်နိုင်၊ ပို့စ်တွေမှာလည်း ကွန်မင့်မပေးနိုင်လို့
ခုတော့ သိသွားပြီ ဘိန်းပဲ စားတော့မယ်...း)
နာမည်တွင်ချင်ရင် ဘိန်းစားပေါ့ အဲလိုလား :D
ရီိလိုက်ရတာ။ ဒါနဲ့ ကြည့်လုပ်ဦးနော်။ အပေါ်မှာ ကိုအောင်သာငယ်တို့..နံမယ်ကြီးဖို့..နည်းလမ်းတွေ ရပြီဆိုပြီး..တကယ်လိုက်လုပ်နေအုံးမယ်။း)
တို့ လဲ နာမည်ကြီးချင်နေတာနဲ့အတော်ပါဘဲ...
တို့ များက ပန်ပန်တို့ လို စာရေးလဲ မကောင်း...
နာမည်ကြီးစေတဲ့ ဟိုလို ခြေထောက် လှလှလေးကလဲ မရှိ... ဒီတော့.. ဘာညာမပြောနဲ့ ... ဘိန်းစားတာဘဲ ကောင်းပါတယ်... ဘိန်းစား သက်ဝေပေါ့... ဟဲဟဲ
ဒါနဲ့ပန်ဒိုရီ ပန်ဒိုရာ ဓာတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲကြီး ဘယ်တော့လုပ်မှာလဲ... ကြိုပြောနော်...
ဘိန်းမစားပဲဦးမောင်စိန် သေခဲ့ရင်တော့မောင်စိန့် အုတ်ဂူ ပဲခေါ်ကြမလား။
ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်မယ်ထင်လဲ။ လူတွေကသေခြင်းတို့ အုတ်ဂူတို့ နဲ့ တွဲအခေါ်မခံချင်ကြဘူးလေ။ ဒုတိယဟာဆိုရင်တော့ ဒေါ်မယ်လှဘယ်လို တုန့် ပြန်မလဲ..
ကျနော်လဲ မောင်စိန်ပဲ လုပ်တော့မယ် ....။
I think your explanation about the banner/picture isabit arrogant (Rude? Nahhh).
လာရယ်သွားသူများ ကျေးဇူးအထူး တင်ပါသည်။
Dear Anonymous> Ops! I did not mean that. I am in holiday mood today and just telling some jokes. Don't take it seriously. Anyway, thanks for your comment. I will be more mindful in future.
အင်း..ထင်တယ်..ဓာတ်ပုံက ဒီလောက်ကောင်းနေတာ မပန်ရိုက်တာ ဖြစ်မယ်လို့.. :P
Thank you for your humble reply… I should had read it more optimistically. No harm intended…
အယ်.. ဘိန်းတော့ မစားပါနဲ့ မပန်ရယ်.. ပေါင်မုန့် ကျွေးပါ့မယ်.. ;-)
ပုံပြင်လေးရော ဥပမာတွေကိုရော ဖတ်ပြီး ပြုံးသွားတယ်။ တခါတလေ အိမ်မှာလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ဓါတ်ပုံ ပြိုင်ပွဲ အမြန်လုပ်ပါ။ မျှော်နေသည်။
တခါတလေ အဲလိုအဖြစ်မျိုးလဲ ရှိတတ်တယ်နော်..
ပုံပြင်က ကြားဖူးပီးသားပေမဲ့ ဖတ်တိုင်းလည်းပြုံးမိပါတယ်
အမ ရဲ့လက်ရာ ပုံလေးတွေပဲကြည့်ချင်ပါ၏
မပန်ရေ မရောက်ဖြစ်တာလဲ အတော်ကြာပေါ့။
ရောက်တုန်း ရီစရာနဲ့တိုးသွားတော့ လန်းသွားတယ်။
ဆောက်လက်စ တံတားကြီးပေါ်မှာ ဘိန်းစားနေတဲ့